Iyo SwitcherCC tweak inosanganisa iyo Center Center neyekushandisa switch | IPhone nhau
Iyo SwitcherCC tweak inosanganisa iyo Center Center pamwe neshanduro switch
Kwekuputsika kwejeri kwave kuri muzvidimbu zvemakore akati wandei. Kunyange chiri chokwadi kuti vabiridzi vanoramba vachishanda pakaputsika kwejeri kweimwe neimwe nyowani vhezheni yeIOS inotangwa neApple pamusika, simba kana chishuwo chavanoisa pariri chakadzikira nekufamba kwenguva uye zviri kuwedzera zvakanyanya kuoma kunakidzwa nekuparadzwa kwejeri.
Dambudziko renharaunda yevasungwa nderekuti vakuru vanovhavha avo vagara vakazvipira kumabasa aya vakapihwa basa neApple uye nevamwe vanogadzira software. Chii chimwe iyo mibairo iyo Apple inopa yekutsvaga bugs iri kuwedzera uye inowedzera kunaka uye vanobiridzira vangatoda kuwana mari pane kuzivikanwa munharaunda
Kunyangwe zvakadaro, kuchine maTweaks matsva ari kuuya kune imwe nzira Cydia application chitoro, kana kugadzirisa kune aripo, zvichiratidza kuti kupunzika kwejeri muchikamu kuchiri kurarama zvakanyanya, zvirinani mupfungwa iyi. Nhasi tinotaura nezveSwitcherCC nyowani tweak yevashandisi vejeri, rakafuridzirwa neiyo yengano Auxo, sezvo mugadziri wayo anoita kunge akasiya kuvandudza iyo inonakidza tweak.
Kana tangoisa iyo Tweak SwitcherCC isu tinofanirwa Dhinda kaviri pabhatani repamba kana swipe kubva pasi pekona kuratidza ino nyowani yakarongedzwa interface iyo inotiratidza iyo Control Center uye maapplication akavhurika panguva iyoyo.
Iyo itsva Control Center yakakamurwa kuita matatu mapeji, chekutanga pane zvese chinotiratidza maswitch ekugonesa tochi, kubatanidza kweWi-Fi, bluetooth, iyo Usakanganisa mamiriro kana iyo yekutenderera kiyi, pamwe neiyo ndege ndege, iyo stopwatch, kamera, wachi uye kutonga pamusoro pechiedza chekupenya.
Pane peji rechipiri tinowana iyo AirDrop, AirPlay uye NighShift sarudzo nenzira yezvishoma. Chekupedzisira, pane rechitatu peji tinowana mimhanzi inoridza, uye zvekutamba zvekudzora. Pakati pesarudzo dzekugadzirisa, SwitcherCC inotibvumidza kugonesa iyo Rima nzira, yakanakira patinoshandisa mudziyo wedu murima.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Iyo SwitcherCC tweak inosanganisa iyo Center Center pamwe neshanduro switch
Ungada here iPhone 8 ine yakajeka kumashure? Iyi yakajeka iPhone 8 pfungwa [Vhidhiyo]
LastPass inopeta kaviri mutengo webasa rayo rekunyorera